माघको तेस्रो साताबाट हेटौंडा गोल्डकप हुने - हेटौंडा टुडे
माघको तेस्रो साताबाट हेटौंडा गोल्डकप हुने
९ पुष २०७७, बिहीबार १६:५२
हेटौंडा/माघको तेस्रो साताबाट हेटौंडामा एफ.सि. विजय युथ हेटौंडा गोल्डकप हुने भएको छ । विहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक एफ.सि. विजय युथ क्लबले गोल्डकपबारे जानकारी दिएको हो । क्लबका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक राजेश भेटवालले प्रतियोगितामा १० वटा टिम सहभागिता रहने बताए । कोरोना महामारीको कारण ए डिभिजनका क्लबहरुको सहभागिता नभएता पनि मकवानपुर, चितवन, सिमरा, सिन्धुली, काठमाडौं बीरगंज, सर्लाहीका क्लबहरुको सहभागिता रहने बताए ।
गोल्डकपमा विजेतालाई ३ लाख, ट्रफि र मेडल, उपविजेतालाई १ लाख ५० हजार, ट्रफि र मेडल प्रदान गरिने जनाइएको छ । विधागत खेलाडीलाई जनही ५ हजार, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई १५ हजार प्रदान गरिने भेटवालले बताए ।
कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष सुदिप राजबहाक, प्रशिक्षक सुविन घिमिरे, खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सानु लामा, नगर अध्यक्ष चन्द्र शाही, फुटबल संघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ, जिल्ला अध्यक्ष टिका लामा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । हेटौंडाको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको खेल मैदानमा माघको २२ गते सुरु भई फागुन २ गते सम्म खेल हुनेछ ।